galmudugnews.com » Gabay: Xaqsoor (xisbiga UDUB)
Home » WARARKA » Gabay: Xaqsoor (xisbiga UDUB) Gabay: Xaqsoor (xisbiga UDUB) galmudug on
Apr 3rd, 2012 //
No Comment Views 16927Gabay: Xaqsoor (xisbiga UDUB)
Waxaa tiriyey: Jamaal Cali Xuseen
Gabaygan waxa uu soo baxay March 29keedii, 2012 markii lay sheegay shirkii ay guddida fulinta ee xisbiga UDUB ku yeesheen guriga Gudoomiyaha xisbiga mudane Daahir Riyaalle Kaahin. Halkaasoo uu mudane Riyaalle uu go’aamo ugu sheegayey isagoo laalaaya go’aamaddii ka horeeyay ee guddida fulintu ay si aqbaliyad ah hore ugu gaadheen markii uu isagu dalka kaga maqnaa wadankaasi Faransiiska. Ficilkaa gudoomiyahuna waa mid ka baxsan xeerka Xisbiga oo guddida fulinta waxa laali kara go’aankooda uun shirweyne xisbi oo la sameeyo. Haddaba in badan baan ka aamusnaa khilaafkan xisbiga oo aan ixtiraam muujiyey inkastoo laygu gardarooday oo hadalo deel-qaaf ah saaxaafadda ay ka mariyeen masuuliyiinta kale hawgu horeeyo gudoomiyaha Xisbiga Mudane Riyaalle oo markaasi Paris joogay isagoo idaacaddaha siinaayey waraysiyo lid igu ah aniga runtiina fajaciso igu noqotay maadaama uu Riyaalle yahay ninkii ii soo horseeday xisbiga laftigiisa iyo arrinkan aan galayba. Shuruudo badan oo ay igu xidheen oo runtii aanan qaarkood raalli ka ahayn ayaa laygu kalifay, waxaanan dareemay inay goobtani tahay meel shacbi wanaagsan iyo gudiyo fiican haysata laakiin ay hogaankeedii u sareeyay raacaynin sharciyaddii lagu heshiiyey ee ay hore u qorteen. Kolay Gabaygani waa hor-dhac waraysigayguna wuu ka danbeeyn doonaa Inshallah anigoo si fiican u qaadaa dhigi doono xaallada taagan haddii Ilaaha awooda lihi uu igu simo. Anigoo weli wax badan xeerinaya ayaan Gabaygan ku soo hal qabsaday Axmed Ismaaciil Aaden (Axmed Keyse) oo ah kusimaha xoghayaha guud ee xisbiga UDUB oo markaan warkaasi maqlay ka hubinaayey isaga xaqiijinta warkaasi.
Odaytinimo xibigaan bidayaye, xulatay laabtaydu
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21019 hitsContact US - 19681 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15781 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15391 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13957 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13902 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13824 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13656 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11818 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11796 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11742 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11535 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11509 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11366 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11240 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11072 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11065 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10839 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10468 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10360 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10342 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10032 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10026 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9793 hits Home About